ULayini woCingo wamahhala wokwezokwesekwa kwabafundi e-UKZN.
Ngokohlelo oludidiyelwe lokweseka abafundi ngalesi sikhathi sokufundela emakhaya, i-UKZN isivule ulayini wocingo wamahhala ozokwenza ukuthi bonke abafundi bakuwona womane amaKolishi bakwazi ukushayela emahhovisi akwa-Student Support Services mahhala kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu kusukela ngehora lesi-8 ekuseni kuye ekugamanxeni kwehora lesi-4 ntambama.
Amahhovisi ezokulekelelwa kwabafundi (i-SSS) emaKolishi ahlinzeka ngosizo lwengqondo nolwenhlalo kubafundi. Osizweni olukhona kubalwa ukwelashwa kwabafundi okuphathelene nengqondo, ukuthulula okubakhathazayo nokwelulekwa, ukwesekwa namasu empilo.
Imenenja yezokuLekelelwa kwaBafundi eKolishi lezesiNtu, uDkt Angeline Stephens, uthe ubhubhane i-coronavirus selube nomthelela omkhulu esimweni sengqondo somuntu ngamunye, umndeni nomphakathi. ‘Kuze kube manje umphumela ukhombisa ukuxhumana phakathi kokwehlukana ngokwenhlalo nokomnotho okugqamile ezweni lethu nokwanda kwamathuba okukhathazeka kweminye imiphakathi.’
Wengeze ngokuthi indaba yokuthola usizo kusikhungo imqoka ekwesekeni abafundi. ‘Ucingo lwamahhala lineqhaza elibalulekile kuloku ekutheni abafundi bakwazi ukufona mahhala ukuze bathole ukwesekwa ngokwengqondo. Loku kumqoka ikakhulu esimweni samanje se-COVID-19. Ithimba e-ICS, liholwa nguMnu Deano Kannigan noMnu Jarrod Harrington, lenze umsebenzi omuhle ekutheni lo msebenzi unyakaze.’
Limatasa ngesigaba sesibili salo msebenzi, esingukufaka ubuchwepheshe obufanele kuma-laptop abasebenzi bakwezokulekelelwa kwabafundi. Loku kuzokwenza ngcono usizo olutholakalayo kulabo bafundi abakhetha ukusizakala ngocingo. Okwamanje abafundi abasizakala nge-imeyili, ucingo, u-Zoom chat noma ividiyo.
Abafundi bangashayela ku-0800 800 017 mahhala ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu phakathi kwehora lesi-8 nokugamanxa kwehora lesi-4 ntambama ukufinyelela kunoma yiliphi ihhovisi lasemaKolishi akwezoLimo, ezobuNjiniyela nezeSayensi, ezeSayensi yezeMpilo, elazesiNtu, elezifundo zoMthetho nokuPhatha.